मैले उल्लेख गरेको ३ शक्ती मध्ये पहिलो शक्ती राजाको वारेमा आज विचार गरौ । २४० वर्षो शाह वंशको इतिहासमा म अरुको धारणको केही तर्क मान्ने पक्षमा छैन । शुरुका केही वर्षएकिकरणको नाममा युद्धमा केद्रित थियो ।अनि सत्ताको लागि संधर्षभन्दै १०४ वर्ष राणा शासन को गणितिय हिसावलाई म राजाको प्रत्यक्ष शासन अवधीको रुपमा मान्ने पक्षमा छैन । २००७ सालको प्रजातन्त्र र १०१७ साल पछीका ३० वर्ष २०६१ साल पछिका २ वर्ष राजाको प्रत्यक्ष शासन अवधी हो । यति अवधीमा नेपालमा राजतन्त्र वलियो वन्ने प्रत्यक्ष अवसर मिल्यो ।
सैनिकलाई शाही सैनिकको रुपमा विकसित गरि त्यसको परमाधिपती रुपमा राजा भए पछि राजाको शक्तीले आकास छोयो । दोस्रो जनआन्दोलन पछि राजाको शक्तीमा केशी हृास आएपनि पर्ण हटिसकेको छ भन्ने मलाइ लाग्दैन । एकापटी सेनामा रहेको राजा प्रतिको आस्थामा कमि आएको छ जस्तो मलाइ लाग्दैन । अर्को तर्फराजाका र्समर्थक नै छनैन भन्ने पनि होइन । राजा ज्ञानेनद्रको व्यापारिक कौसलता र युवाराज पारसको चरित्रको कारण वर्तमान राजा प्रति जनता लाई वितृष्णा लागे पनि अझै एउटा ठुलो जमात राजाको र्समर्थक रहेको मेरो अनुमान छ । यो जमात सात दलको गठवन्धन भित्रै रहेको छुपेको छैन ।
राजा हटाउने कुरा गर्दा हामी सजिलै समस्या सकिने तर्क गछौ । तर यो दुभाग्य पुर्ण तर्क वाहेक केही हुन सक्दैन । हाम्रो मुलुकको अवस्थामात्र नहेर्ने हो भने क्याम्वोडियामा पुन राजा फकाएको घटनालाई उदाहरण लिउ । नेपालको भुतरातल र राजनैतिक परिवेश हेर्दा राजाले निवासनमा पनि उतिकै चलखेल गर्ने छन भन्ने मेरो राय हो । ठुलो क्षेत्र भारत ले ओगटेको र खुला सिमाना सधै नेपालको लागि खडकिन सक्छ । माउवादीलाई धारमा ल्याउदा देशमा शान्ती हुन्छ भन्ने तर्क अहिले र्सार्थक छैन । झनै जातिय राजनितिको चपेटामा नेपाल परेको छ । यसैले यदी राजालाइ सदाको लागी नेपालवाट हटाउने हो भने के नारा मात्रले हुन्छ । यसको पछि पर्ने असरको वारेमा वेलामा नै सचेत हुनु आवश्यक छैन? जनताले चाहेमा राजतन्त्र हटदैन भन्ने होइन तर परिणम र त्यसको समाधमाको उपाय के त -
गणतन्त्रको कुरो टुगांउने किन संबिधान सभा गर्न पर्यो, सिधै जनमत संग्रह गरे हुन्न भनेको, यस कि नो सिधै अबज्केटीभ, त्यो संबिधान सभाको चुनाब गरेर किन सब्जेक्टीभ बनाको होला ? गणतन्त्रको घोषणा भनेको कतै बिरालोको पुछार समाउने मुसाहरुको सल्लाह जस्तो त होइन ?
I think Gyanendra is the most stupid kind we have so far. Poor Paras, better makeanew party , Nepal Ganantantra Party ( Parasbad) and becomeaminister or like that. No doubt, when king will be gone, these ministers will expect same thing like kind is enjoying like sawaris ,army ko salam, baksis etc. So Paras, you will get the same thing if you openaparty.
जनमत संग्रहको सवालमा सत्ताको कुण्डलीमा आसिन गिरीजाबाबुको तर्क थियो, त्यसले राजाबादीहरुलाई एकत्रित तुल्याउंछ रे अनी जे जती मत गणतंत्रको बिपक्षमा आउंछ, त्यसलाई पनि सम्मान गर्नु पर्ने हुन्छ रे। अब यो जनमत संग्रहको कुरो उंहाले नबुझेको कि जनतालाई मुर्ख बनाउनु भएको हो बुझिएन। जनमत संग्रह भनेको कुरो त कुनै कुरा कि yes कि no मा निर्णय गर्न होइन र?
जनमत संग्रहमा गएमा गणतंत्रको पक्षमा अत्यधिक मत आउने कुरो निश्चित जस्तै छ। त्यसकारण जनमत संग्रहमा सिधै नगएर संबिधान सभाको पहिलो बैठकले राजतंत्रको बिषयमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरो कान् सिधै अगाडीबाट नछोएर पछाडीबाट छुने कुरो हो। या त गिरीजाबाबूले राजासंग कुनै गोप्य संझौता गर्नु भएको छ या राजा र राजभक्त सेना संग प्रत्यक्ष मुठभेड नहोस भन्ने चाहनुभएको हुनसक्छ।